စစ်ကောင်စီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတချို့ တွေ့ဆုံမည်မဟုတ် — မြန်မာဌာန
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့က ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
RFA က ကနဦးရသိရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)၊ ပြည်သူ့ပါတီ၊ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD)၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၊ နာဂအမျိုးသားပါတီ (NNP)၊ တအာင်း (ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ တို့ဟာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ တွေ့ဆုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို စစ်ကောင်စီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဖိတ်ကြားစာတွေ ပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ALD ပါတီရဲ့ ပြောခွင့်ရှိသူ ဦးဦးလှမြင့်ကလည်း ဘယ်စစ်အာဏာရှင်နဲ့မှ လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
"ပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းကမ်းထဲမှာ မည်သည့် အာဏာရှင် အစိုးရကိုမှ လက်မခံဘူးဆိုတာပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒီစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာဟာ စစ်အာဏာရှင်ပဲ အဲ့ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မကိုက်ဘူး၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာကိုက ဒီစစ်အာဏာရှင်ကို လက်မခံဘူးဆိုတော့ အဲ့ဒီအဖွဲ့သစ်ကိုလည်း လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး"… လို့ ဦးဦးလှမြင့်ကပြောပါတယ်။
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီရဲ့ ဦးစိုင်းကျော်ညွန့်က "စစ်အာဏာသိမ်းတာကို အစထဲက ကန့်ကွက်ထားပြီးသား အဲ့တော့ သွားတက်စရာမလိုဘူး ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ တုန့်ပြန်စရာမရှိဘူး" လို့ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးဆက်ဆံတာတွေ မလုပ်ဖို့ပါတီတွင်း အစည်းအဝေးခေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြည်သူ့ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးမင်းဇေယျာကလည်း ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ပါတီက ၈၈ မျိုးဆက်တွေကို အခြေခံထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ် ၈၈ မျိုးဆက်ရဲ့ မူကိုက အာဏာရှင်မှန်သမျှ ဆန့်ကျင်ကြဆိုတဲ့ မူကို အခြေခံထားတာ အဲ့ဒါကြောင့် ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းပေးတဲ့ (UEC) နဲ့ ပါဝင်ဆက်ဆံမှုမရှိရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း CEC အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်" လို့ ဦးမင်းဇေယျာက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မှာ ပါဝင်နေရာယူထားတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP)၊ မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ (MUP) တို့ကတော့ တက်ရောက်ကြပါမယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ပါတီကော်မတီဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဖေသန်းက ပါတီအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့် အစည်းအဝေး တက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့ လက်တွဲပြီး လုပ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးနုစိန်ကလည်း အဲ့ဒီထဲမှာပါနေတော့ ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးထားမှတော့ သူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးကို မတက်ရောက်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊ အဲ့ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းစဉ်တခုအနေနဲ့ တက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ဆယ်လို့ သဘောပေါက်ပါတယ်"… လို့ ဦးဖေသန်းက ပြောပါတယ်။
မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ (MUP) ကတော့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၂ နိုင်စံတင်းကို တက်ရောက်ဖို့ တာဝန်ပေးထားတယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲစာရင်းမှားယွင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို စစ်ကောင်စီအမိန့်နဲ့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
NLD အစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးလှသိန်းကို ဖမ်းဆီးထားသလို မြို့နယ်နဲ့ တိုင်းအလိုက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ အတော်များများကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲမဲသမာမှုတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကို အရေးယူမယ်လို့ အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြောထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက အသစ်ခန့်အပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အားလုံးကို တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ကြားစာ ပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မုံရွာက သပိတ်ခေါင်းဆောင် ကိုဝေမိုးနိုင်
Hi Min Aung Haling , Now you are catching the innocent peoples. But Next your turn.
We want democracy and freedom.